बेनी अस्पतालको विवाद: डक्टरले दिए संचालक समिति सदस्य विरूद्ध मुद्दा ! - Bulbul Samachar
बेनी अस्पतालको विवाद: डक्टरले दिए संचालक समिति सदस्य विरूद्ध मुद्दा !
bulbul बुधवार, चैत २ गते 82 views
बेनी जिल्ला अस्पताल म्याग्दी बेनीमा उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै चर्किएको विवादले उत्कर्ष रूप लिन थालेको छ। गत आईतबार जलजला गाउँपालिका वडा न० ३ बस्ने पुष्पा श्रेष्ठको उपचारको क्रममा बेनी अस्पतालमा मृत्यु भएपछि मृतक पक्ष र अस्पतालको प्रशासनबीच विवाद भएको थियो । माशंपेशीको दुखाईको उपचारमा आफ्नो श्रीमानसंगै अस्पताल पुगेकी श्रेष्ठको आईतबार बिहान ११ बजे मृत्यु भएको थियो। डाक्टर तथा नर्सको लापरबाही र असक्षमताले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तहरू आक्रोशित बनेका छन् । मृतकको परिवार , अस्पताल सञ्चालक समिति, अस्पतालका मे . सु . तथा स्थानीय सहितको टोलीले सोमबार छलफल गरेपनि विवाद टुंगोमा पुगेको थिएन । यसैबिच गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट भर्खरै अस्पताल सञ्चालक समिति सदस्यमा हालै नियुक्त भएका विज्ञानराज शर्मा विरूद्द जिल्ला प्रहरेर कार्यलयमा उजुरी दर्ता भएको छ । अस्पतालका मे सु जितेन्द्र कँडेलले मृतकको पक्षमा लागि आफ्नो मान मर्दन गरेको आरोप लगाउँदै अस्पताल सञ्चालक समितिका सदस्य शर्मा विरूद्द जिल्ला प्रहरी कार्यलयमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
यता आरोपित शर्माले भने डाक्टर समयमा नआएका कारण बिरामीको मृत्यु भएको र उक्त जिम्मेवारी अस्पतालका मे. सु. कँडेलले लिनुपर्ने भन्दै उनीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । “मे.सु.भयर बाहिर काम गर्ने? हिँडेर आयको बिरामी मृत्युको मुखमा कसरी पुग्यो?” शर्मा भन्छन् ।
आईतबार भएको सर्वपक्षको छलफलमा पनि शर्माले कर्मचारी समायोजनमा एक गाउँपालिकाको अस्पतालमा सरुवा भएर पनि पत्र लिन आनाकानी गरिरहेका कँडेलको राजिनामा माग गरेका थिए । बिगत लामो समयदेखि बेनी अस्पतालमा डाक्टर तथा नर्सको लापरबाही एवम व्यवस्थापकिय कुरामा कमी भएको भन्दै जनगुनासाहरु बढ्दै गैरहेका छन् ।
फलेवासमा समाजवादीको टोल समिति गठन !